GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Norwegian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
N’ABALỊ iri abụọ na ise n’ọnwa Disemba 2010, otu nwaanyị onye Briten dị afọ iri anọ na abụọ degaara ndị enyi ya ozi n’ebe ha na-akparịta ụka n’Ịntanet na ya chọrọ igbu onwe ya. O dere ozi ahụ ka ọ ga-abụ ndị enyi ya hụ ya, ha agbatara ya ọsọ enyemaka. N’agbanyeghị na ndị enyi ya ya na ha na-akpa n’Ịntanet karịrị otu puku, e nweghị otu n’ime ha gbataara ya ọsọ enyemaka. N’echi ya, ihe ndị uwe ojii hụziri bụ ozu nwaanyị ahụ. Gịnị mere? O nwere ọgwụ ọ ṅụrụ, ya egbuo ya.
Taa, nkà na ụzụ ọgbara ọhụrụ na-eme ka ndị mmadụ nwee ike inweta ọtụtụ ndị enyi n’Ịntanet. Naanị ihe onye chọrọ inweta enyi ga-eme bụ idenye aha onye ọ chọrọ ka o soro ná ndị enyi ya. E nwee onye onye ahụ na-achọghịzi ka ọ bụrụ enyi ya, ya akachapụ aha ya. Ma, ihe mere nwaanyị ahụ anyị kwuru okwu ya gosiri na ezigbo enyi dị ụkọ. Otu nchọpụta e mere gosiri na n’agbanyeghị na ndị mmadụ na ibe ha na-akparịta karịa ka a na-emebu, ọtụtụ enweghị ndị ha ga-akpọ ezigbo enyi ha.
Ọtụtụ ndị ma na mmadụ inwe ezigbo enyi bara uru. Ọ ga-abụkwa na gịnwa kwetara. O nwekwara ike ịbụ na ị ma na ọ bụghị idenye aha mmadụ ná ndị enyi gị n’Ịntanet ga-eme ka gị na onye ahụ bụrụ enyi. Olee ụdị onye ị chọrọ ka ọ bụrụ enyi gị? Olee otú ị ga-esi bụrụ ezigbo enyi mmadụ? Gịnị ka ị ga-eme ka gị na enyi gị dị n’ezigbo mma?
Ka anyị kwuo ihe anọ nwere ike inyere anyị aka nakwa amaokwu Baịbụl ndị ga-enyere anyị aka ịna-akpa àgwà ga-eme ka ndị ọzọ chọọ ka anyị bụrụ enyi ha.
1. Na-eme Ihe Gosiri na Ị Hụrụ Ya n’Anya
Anyị ekwesịghị ịbụ enyi mmadụ n’ọnụ. Ihe ọ pụtara bụ na ezigbo enyi mmadụ na-enyere ya aka, na-emekwara ya ihe na-egosi na ọ hụrụ ya n’anya. Ị manụ na ọ bụ aka nri kwọọ aka ekpe, aka ekpe akwọọ aka nri. N’ihi ya, enyi na enyi kwesịrị ịna-emere ibe ha ihe, hụkwa ibe ha n’anya. Aka ọ bụla i nyeere enyi gị efughị ọhịa. Jụọ onwe gị, sị, ‘M̀ nwere ike iwepụta onwe m jiri oge m na ihe ndị m nwere mee ihe ga-abara enyi m uru?’ Cheta na ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ezigbo enyi, gịnwa ga-abụ ezigbo enyi.
ỤDỊ ONYE NDỊ MMADỤ NA-ACHỌ IMETE ENYI
Otu nwaanyị aha ya bụ Irene, sịrị: “Ebe ọ bụ aka ájá ájá na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ, mmadụ ga na-agba mbọ ka ya na enyi ya dị n’ezigbo mma. Buru ụzọ kpebie na ị ga-abụ ezigbo enyi. Na-emere enyi gị ihe ọma, gosikwa ya na ihe gbasara ya na-emetụ gị n’obi. Wepụtakwa oge ị ga-eji na-enyere ya aka.”
Otu nwoke aha ya bụ Luis Alfonso, sịrị: “Ndị mmadụ na-achọkarị naanị ihe ga-abara ha. Ha anaghị enyere ndị ọzọ aka. N’ihi ya, obi na-adị anyị ụtọ ma e nwee onye na-emere anyị ihe n’ebughị n’obi inweta ihe n’aka anyị.”
“Otú unu chọrọ ka ndị mmadụ na-emeso unu, na-emesonụ ha otú ahụ. Na-enyenụ ihe, ndị mmadụ ga-enyekwa unu ihe.” (Luk 6:31, 38) Ihe Jizọs na-ekwu bụ ka anyị ghara ịna-achọ ọdịmma onwe anyị naanị, nakwa ka anyị na-emesapụ aka. Anyị na ndị enyi anyị ga-adị ná mma ma anyị na-emesapụrụ ha aka. Ọ bụrụ na ị na-emere ndị enyi gị ihe n’ebughị n’obi ka ha kwụghachi gị, ndị mmadụ ga-achọ ka ị bụrụ enyi ha.
2. Na-akọrọ Ya Ihe Dị Gị n’Obi
Enyi na enyi agaghị na-adị ná mma ma ọ bụrụ na ha anaghị akọrọ ibe ha ihe. N’ihi ya, na-ekwurịtanụ ihe ọ bụla na-amasị unu. Na-ege enyi gị ntị, na-echebakwara ihe ọ gwara gị echiche. O mee ihe ị ga-eji jaa ya mma, jaa ya mma, na-agbakwa ya ume. Oge ụfọdụ, enyi anyị nwere ike ime ihe anyị ga-eji dụọ ya ọdụ ma ọ bụ baara ya mba, ma ọ naghị adị mfe. N’agbanyeghị na o nwere ike isiri anyị ike, ezigbo enyi kwesịrị ịkata obi gwa enyi ya ihe ọ na-anaghị emeta, gwakwa ya ihe ga-enyere ya aka ịgbanwe.
Nwoke aha ya bụ Juan kwuru, sị: “Ezigbo enyi kwesịrị ịna-agwa enyi ya obi ya, ma o kwesịghị iwe iwe ma ọ bụrụ na enyi ya ekwetaghị ihe o kwuru.”
Otu nwaanyị aha ya bụ Eunice sịrị: “Ọ na-adị m ụtọ ma ndị enyi m na-abịa m nso mụ na ha ana-ekwurịta ihe ụfọdụ, karịchaa mgbe o nwere ihe na-enye m nsogbu.”
Nwaanyị aha ya bụ Silvina kwuru, sị: “Ezigbo enyi gị ga-agwa gị nke bụ́ eziokwu maka na ọ hụrụ gị n’anya, ọ sọgodị ya ya bụrụ na ọ ma na ihe ahụ ga-ewe gị iwe.”
“Onye ọ bụla aghaghị ịbụ onye na-anụ ihe ngwa ngwa, onye na-adịghị ekwu okwu ngwa ngwa, onye na-adịghị ewe iwe ngwa ngwa.” (Jems 1:19) Obi na-adị mmadụ mma ma enyi ya na-ege ya ntị. Ọ bụrụ na anyị anaghị ekwe ka enyi anyị tinye ọnụ ma anyị kpawa nkata, ọ na-egosi na anyị chere na ihe anyị na-ekwu ka mkpa karịa ihe ọ bụla ọ chọrọ ikwu. N’ihi ya, na-ege enyi gị ntị ma ọ gwawa gị ihe na-esogbu ya. Iwe ewela gị ma ọ gwa gị eziokwu. Cheta na Ilu 27:6 kwuru, sị “Ọnyá onye hụrụ mmadụ n’anya mepụrụ ya si n’ezi obi.”
3. Cheta na Enyi Gị Ezughị Okè
Ka anyị na-abịarukwu enyi anyị nso, ka anyị ga-achọpụtakwu ebe ọ naghị emeta. E nweghị onye zuru okè, ma anyị ma ndị enyi anyị. N’ihi ya, anyị ekwesịghị ịna-atụ anya na ndị enyi anyị ga na-emetacha ihe niile. Kama, anyị kwesịrị ịna-aja ha mma n’ebe ha na-emeta ma na-eleghara amaghị eme ha anya.
Otu nwoke aha ya bụ Samuel sịrị: “Ọ na-abụ mmadụ mejọọ ihe, ya asị na ọ bụ maka na ya ezughị okè, ma ọ ga na-atụ anya ka ndị ọzọ na-emetecha ihe niile. Ọ bụrụ na anyị echeta na anyị na-emejọ ihe nakwa na anyị ga-achọ ka ndị ọzọ gbaghara anyị, ọ gaghị na-esiri anyị ike ịna-agbaghara ndị ọzọ.”
Otu nwoke aha ya bụ Daniel sịrị: “Buru n’obi na ndị enyi gị nwere ihe ndị ha na-agaghị na-emeta. E nwee ihe seere unu okwu, gbalịanụ dozie ya ozugbo. Gbaa mbọ chefuokwa ihe ahụ o mere gị.”
Ị̀ na-agbaghara ndị mejọrọ gị?—Ndị Kọlọsi 3:13, 14
“Anyị niile na-asụ ngọngọ ọtụtụ ugboro. Ọ bụrụ na onye ọ bụla adịghị asụ ngọngọ n’okwu, ọ bụ onye zuru okè, nke nwere ike ịchịkwa ahụ́ ya dum.” (Jems 3:2) Ọ bụrụ na anyị na-echeta ihe a Baịbụl kwuru, anyị agaghị na-ewere ndị enyi anyị iwe. Ọ ga-enyekwara anyị aka ịna-eleghara amaghị eme ha anya. Ahụ́ agaghị na-agbakasịkwa anyị ma ha mejọọ anyị. Baịbụl kwuru, sị: “Na-ediri ibe unu ihe ma na-agbaghara ibe unu kpamkpam ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ihe mere ọ ga-eji mee mkpesa megide ibe ya. . . . Ma, e wezụga ihe ndị a niile, yirinụ ịhụnanya dị ka uwe, n’ihi na ọ bụ ihe nkekọ zuru okè nke ịdị n’otu.”—Ndị Kọlọsi 3:13, 14.
4. Metekwuo Ndị Ọzọ Enyi
Nke bụ́ eziokwu bụ na ọ bụghị onye ọ bụla anyị hụrụ, anyị emete ya enyi. Ma, ọ pụtaghị na ọ bụ naanị ndị ọgbọ anyị ma ọ bụ ndị anyị na ha tokọrọ ka anyị ga-emete enyi. Anyị nwere ike imete ma ndị ọgbọ anyị ma ndị anyị tọrọ ma ndị tọrọ anyị enyi. Ndị obodo ọzọ ma ọ bụ ndị ọ na-enweghị ka ọ hà ha nwekwara ike ịbụ ndị enyi anyị. Ọ bụrụ na anyị emete ndị dị iche iche enyi, anyị ga-erite uru buru ibu.
Otu nwoke aha ya bụ Unai kwuru, sị: ‘Ọ na-abụ a tatụ ụkwa a tatụ akị. N’ihi ya, ọ bụghị naanị ndị ọgbọ gị na ndị na-eme ka gị kwesịrị ịbụ ndị enyi gị.’
Nwaanyị aha ya bụ Funke sịrị: “Ihe nyeere m aka ịghọ mmadụ bụ na ọ bụghị naanị ndị ọgbọ m bụ ndị enyi m. Amụtala m otú mụ na mmadụ ga-esi na-emekọ ihe n’agbanyeghị afọ ole onye ahụ dị ma ọ bụ onye ebe ọ bụ. Ihe a emeela ka mụ na ọtụtụ ndị bụrụ enyi. Otú m si eme na-atọkwa ndị enyi m ụtọ.”
Ị̀ na-emete ndị dị iche iche enyi?—2 Ndị Kọrịnt 6:13
“Ya mere, iji kwụọ anyị ụgwọ—m na-ekwu dị ka m̀ na-agwa ụmụntakịrị—unu onwe unu, megheenụ obi unu.” (2 Ndị Kọrịnt 6:13) Baịbụl gbara anyị ume ka anyị meghee obi anyị, ya bụ, ka anyị na-emete ndị dị iche iche enyi. Ọ bụrụ na anyị na-emete ndị dị iche iche enyi, anyị ga-amụta ọtụtụ ihe n’aka ha, ndị mmadụ ga-achọkwa ka anyị na ha bụrụ enyi.